Accueil > Gazetin'ny nosy > Raholdina Betaitsofina : Mandrahona ho faty mpanao gazety indray
Taorian’ny famohanay tato amin’i La Gazette de la Grande Ile ny ady tany teny Fenoarivo izay iandanian’i depiote Raholdina Betaitsofina maimbo vava ny fanohanany olona dia fandrahonana ho faty no vokatr’izany.
Lasa mpisolovava indray amin’ny haino aman-jery ary manao fitaovana fampihorohorona amin’izany. Milaza izy fa mpanao “kung-fu” sy manana “gros bras” ka tsy matahotra an’iza na iza. Tamin’ny fisehoany tao amin’ny fahitalavitra maromaro teto Antananarivo ny herinandro lasa teo dia nilaza izy fa manana basy ara-dalàna ka tsy maintsy hamaly amin’ny fihatsiana, ary “tsy hihina ny aleko maty” fa “hihinana ny aleoko velona” ka hampiasa ny basiny. Tena asa fampihorohoroana tanteraka izany. Nandehanany tany amin’ny fianakaviany ka nampitandrina fa hovonoiny ho faty raha mbola mitohy ny famoahany an- gazety ity raharaha ady tany ity. Nikoropaka ny fianakaviana vokatr’izany ka nifamory ary nampiantso ny mpanao gazety ity mba hijanona ny fanoratana an’i Betaitsofina manomboka izao ary tsy hiresaka momba ilay ady tany intsony.
Raha miverina amin’ny tantara isika dia efa nandrahona an’i depiote Nicolas Randria-nasolo avy any Betroka koa izy tamin’ny andro fitondrana Hery Rajaonarimampianina iny. Nitondrany “gros bras” tao Tsimbazaza koa ity olona ity. Dia hiandry ny famonoany ity mpanao gazety ity indray isika izany. Nanompa reny mpiasan’ny vola miandry fiara teo Antaninarenina koa ny herinandro lasa teo Raholdine Betaitsofina. Izany no maha maimbo vava azy.
Santionany amin’ny fampihorohoroana ataon’i Raholdina Betaitsofina indray ity raharaha ity ka ho hitan-tsika ny tohiny. Izany no depiote Malagasy.